पोउवा संघमा मतदान आज, कसले मार्ला बाजी ? | eAdarsha.com
पोउवा संघमा मतदान आज, कसले मार्ला बाजी ?
संघको आगामी नेतृत्वका लागि शनिबार मतदान हुँदैछ ।
महाधिवेशनमा नारायण कोइराला र विन्दु कोइराला सुवेदी प्यानल चुनावी मैदानमा छन् । नारायण वर्तमान समितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र विन्दु उद्योगतर्फकी उपाध्यक्ष छन् ।
नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म मतदान व्यवस्था मिलाइएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । संघको २९ सदस्यीय कार्यसमितिमा २४ जना निर्वाचित र निवर्तमान अध्यक्ष अलावा ४ जना मनोनीत हुने छन् ।
संघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पवनकुमार प्रजापतिसहित ३ सदस्य यसअघि नै निर्विरोध भइसकेका हुन् । कर्पोरेट सदस्यमा हर्कबहादुर अधिकारी र हरिहर सापकोटा तथा औद्योगिकमा हीरामणि पण्डित निर्विरोध भए ।
संघको उपाध्यक्ष (वाणिज्य) मा अर्जुन पोखरेल र सोवित पौडेल तथा उपाध्यक्ष (उद्योग) मा गोकर्ण कार्की र चिनुकुमारी गुरुङ चुनावी मैदानमा छन् । महासचिवमा धनीराम बराल र सुरेन्द्रमान बिजुक्छे, उपमहासचिवमा केशवबहादुर खत्री र धर्मराज बर्तौला भिड्दैछन् । कोषाध्यक्षमा तारानाथ ढुंगाना र बलराम आचार्य चुनावीमा मैदानमा छन् ।
वस्तुगततर्फ उदयबहादुर केसी, उमापति ढकाल, कृष्णप्रसाद तिवारी, बलराम तिमिल्सिना, बालाकृष्ण कोइराला, राजन गोंगजु, रामबहादुर केसी र रुपनारायण भुजेलको उम्मेदवारी छ ।
कोभिड–१९ विरुद्ध सचेतना अपनाउँदै मतदाता क्रमसंख्याअनुरुप ३ स्थानमा मतदान गर्न सकिने निर्वाचन समिति समिति संयोजक तीर्थ श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार मतदान केन्द्र १ मा क्रमसंख्या १ देखि १२०० सम्म, मतदान केन्द्र २ मा १२०१ देखि २४०० सम्म र मतदान केन्द्र ३ मा सम्पूर्ण कर्पोरेट, वस्तुगत, औद्योगिक सदस्य र मतदाता क्रम संख्या २४०१ देखि २९४० सम्मले मतदान गर्न पाउनेछन् ।
मतगणना पुस २६ गते बिहान ८ बजेदेखि संघको सभाहलमा सुरु हुनेछ । संघमा साधारण सदस्यतर्फ मतदाता २ हजार ९ सय ४० जना, औद्योगिक सदस्य १ सय २६, कर्पोरेट ५९, बस्तुगत सदस्य २९ जना छन् ।